Madaxwayne Farmaajo ko Tacsi ka diray Geerida Xildhibaan C.laahi Sheikh | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Friday, May 7th, 2021 | Posted by kalshaale
Muqdisho ( kalshaale ) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo ahaa mudane ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa xusay in Marxuum Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil uu muddo dheer u soo adeegayey dadka iyo Dowladda Soomaaliyeed, isaga oo door muhiim ah ku lahaa geeddi-socodkii dowlad dhiska Soomaaliya. Marxuumka oo xilal kala duwan soo qabtay ayaa noqday Ra’iisal Wasaare Ku-xigeen, Wasiir, Danjire iyo xilligan oo uu ahaa xildhibaan aad looga qadariyo Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
“Innaa lillaahi Wa Innaa Ileyhi Raajicuun. Waxaan tacsi u dirayaa qoyska, qaraabada iyo Qaranka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyoodey Alle ha u naxariistee Marxuum Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil. Marxuumku muddo dheer ayuu u soo adeegayey Qaranka Soomaaliyeed, waxa uuna door ku lahaa geeddi-socodkii dowlad dhiska Soomaaliya, isaga oo xilal muhiim ah ka soo qabtay Xukuumadihii kala danbeeyey ee dalka soo maray.”
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Marxuumka Alle u weydiiyey in uu hoygiisa ka yeelo Jannatul Fardowsa, samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyska, qaraabada iyo guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyoodey.
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=43475
Posted by kalshaale on May 7 2021. Filed under FLASH, MAQAL IYO MUUQAAL, WARARKA, XULKA KALSHAALE. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
12 Comments for “Madaxwayne Farmaajo ko Tacsi ka diray Geerida Xildhibaan C.laahi Sheikh”
May 7, 2021 - 4:39 pm
Daanyeer uu daanyeer dhalay.
Somaliga waxuuba moodaa, waxuu moodaa qofka madaxweeynaha ah in eey job description kiisa tahay tacsi dirrid. In qofka e
Wasiirka ah, xildhibaanka ah shaqadiisa kamid tahay soo dhaweeyn iyobsii sagootin qpf kale at the airport.
Waxaano waa dhaqankii uu Afweeyne barray Somalida. Waa ciyaala suuqnimo iyo qeeyrul mas’uulnimo.
May 7, 2021 - 4:54 pm
@Cadaado isaga garanay Farmaajo, maxaad aabihii ku maagtay?sow ma cadda in aad waalan tahay?
Farmaajo daanyeer in aa dhahdo dhib ma leh,laakiin aabihiis sax ma ahan waadna qaldan tahay JAAJI FOWQAL JAAJI wixii qoraalka nagu kaa baray ayaa qaldanaa.
Dhibka mucaaradnimada qabiilaysan ay leedahay ayay ka mid ah.Farmaajo si kastaa waa u caayi kartaa,balse xaq uma lihid duq dhintay oo Somaliyed in aad daanyeer ku sheegto.Waligaa REDLINE haka gudbin Farmaajo ayay wax kaala dhaxeeyaan caraqada qabiilka iska yaree.
May 7, 2021 - 5:14 pm
Anniga walle adigga qofka ugu horeeya oo aan dilli lahaa ayaad tahay. Adiganna abti abti ayaad rabtaa adigga oo ku qaraabta in aad ku dulmisso kuwa dhiigaada dhinaca abtiga ah, oo doqommo aad u heeysato.
Somalida in eey dayuusiin yahiin waxeey wax weeyn, oo aan la fahmi karrin ka dhigayeen in qof abti kuu ah la dillo, musmaar madaxa laga galling. Sababtoo ah ma fahamsanna kan gurriga kuu jooga. Kan kulla fadhiya in uuba ka qatarsan yahay kan aad xabadda isku riddeeysaan. Waa waxa hadeer Hawiye qaar madoobr heeysta oo nijaasta argagaxissada u badan re Murusade u keeneen, nin naagtooda qabba, oo missana ka shaqeeynaya dhib taagaan doona 50 ka sanno ee soo socda.
Waxaan ku heeystaa nijaaska dhalay Farmaajo in uuba mushkiladd socota 30 sanno kabacdi markii uu dhintay, iyo qofka mushkiladdaas dhexbartanka u ah uu dhalay. Waa dhaqankii daanyeernimadda Somalidda ee dhahayay qofka hadii uu dhinto macaa looga hadlayaa!. Qofka dhalay qof tuug ah, mid dhalay qof dillaa ah, mid dhalay dhillo, mid dhalay qabqable dagaal, mid dhalay argagaxiye, Ma qaladbaa in raadkiisaa la raaca, iyo qeeybta uu ku leeyahay fitnadda assaga kasoo farcantay?
May 7, 2021 - 6:35 pm
Wax walbo sagxada tacsi tirin ayay Ku so arurtay farmaajo shaqadiisa dad ka muhiimsan ayusan u tacsiyay lakin hada shaqo la an aya dhacday anyway ilahay ha u naxariisto xildhibaanka dad ayu abahod walalkod yahay
May 7, 2021 - 6:39 pm
Macangag Farmaajo shaqo LA’AANTA
ayaa u keentay inuu dhaho hala iigu yeero
Dad aan isku sawiro
Ummulaha haloogu geeyo Hospitals
May 7, 2021 - 7:01 pm
Kkkkkkk kkkkkkk been ma aha
May 7, 2021 - 7:07 pm
@Cadaado in aad kinin qaadato anigu horeba baan u ogaa.Wakaase @Dabshid oo kaa hadalo xun qof dhintay haku mashquulo.Farmaajo un buu ku dhegan yahay waana caadi xaq buuna u leeyahay.
Adiga allaha ku caafiyo dadkaan oo kale ayaa dad la dooda.
War kala baro mucaaradnimadu ankee shaqo kuma lahan xaaskaaga walaashaa walaalkaa etc.
War illahay ka baq oo xanuunka ilahay hakaa qaado.
MARKA ADIGA DUQII KU DHALAY IN LA CAAYO SAX AYAAD U ARAGTAA SABABTOO AKHLAAKH MA LIHID KKKKK
Sidaa sax ma ahan,labada qof ee is dhalay,walalaha ah waa kala duwaanan karaan.
Adiga in aad akhlaakh lahayn adigaa ma marqaati ah,aabahaa lama caayi karo doqon xoolo waalan JAAJI ah.
May 7, 2021 - 7:31 pm
Somalijacel ma iga hubta magaca inu qalbi ka yahay kkkkkkk cadaado wa dabiicadisa farmaajo aabihi kaliyah ma aha wa kalmad uu halhayska dhintay aniga xita iska dah aya leyahay walalkay wa sheekada ayu Karol l kale shuuba Ku dhashay kkkk
May 7, 2021 - 8:18 pm
Waa runtaa Farmaajo waa figure waxbaa laga sheegi karaa maxaa yeelay asagaa Dhabarka saartay Masuuliyad Wayn. Soomaalida waxay tiraahdaa “ Nin xil qaaday Eed Qaadyey “. Laakiin waxaa qalad ah in la caayo Aabihiis waliba ayadoo lagu Jiro Bil Ramadan.
May 7, 2021 - 10:16 pm
@Hobyo godan,Xayaad waan idin salaamayaa. @Cadaado ereygaan daanyeer asagaa keenay meesha horta.
Siyaasiyaasi waa la caayi karaa,la dhaliili,laakiin qof dhintay oonba wax shaqo ku lahayn sax ma ahan in la caayo.
Sidoo qofka marka uu caytamo credibility ayaa dhimanee waxaa u muuqanee jaahil aan damiir,diin iyo garasho lahayn.
FG:Ninka ugu cayda badan meeshaan Dabshid waaye,wali ma arkin isagoo dad dhintay ama siyaasi aan ahayn caynaayo qabyaalad wey ku fog tahay isagaana nici doona,balse sax ma ahan cay noo ay tahay.
U fiirso dhowr qof ee reer Waqooyiga amaba Isaaq wey ka duwan yihiin dadka kale system iyo siyaasi un bay ku dhagan yihiin wali ma arkin iyagoo qabiil ama qoys ku dhegan.
Qof kastaa mucaarad iyo muxaafad waa lanoqon karaa laakiin cayda sax ma ahan.
May 7, 2021 - 10:48 pm
Waa lakala figrad duwanaan karaa laakiin waa Qalad in lays caayo qaasatan Mowtida Dadka dhintay in wax laga sheego xataa waalidiinta in la aflagaadeeyo Waa dhaqan xun oo badaw nimo ah.
May 8, 2021 - 4:34 am
Allah, maxaa been iyo ruufiyaanimo, munaafaqnimmo la’iskugu sheekeeynyaa!
Hadeer inta daanyeerta ah ee wadanka baabi’iyay ayaa iskugu nacamleeynaya in eey pass gareeyaan, amaba dadka marsiiyaan in aanan la’isla xisaabtamin. Blah blah. Caydiid waa shintay, Afweeyne waa dhintay, blah blah, doofaar Xassan Daahir Aweeys waa dhintay marka yaan wax laga sheegin. Bal caqligaas daanyeernimadda ah ila arka. So, hadii aanan wax ka sheegin, ma u duceeynaa? Ma ammaanaa? Lols
Anniga iga qorra, ilaa inta la’isxisaabiyo, oo iska daa daanyeer dhintay wax lagga sheegee, xataa, danbiga uu galay, waxa uu sameeyay laga gooya caruurtiisa, naagahiisa iyo wax kasta oo la dhashay walaahin bilaahi tollaahi ayaan ku dhaartee in reysan Somaliya jidka saxda ah kusoo istaageeynin.
Hala is xisaabiyo waa halaga hadlo qof walba waxa uu sameeynayo inta ui mool yahay iyo after the fact marka uu dhinto.
Hadeer dhashii dambiilayaashasha, shashii midgaha. Iyo yaxarta, dhashii qabqablayaasha dagaalka, dhashii argagaxissada sidda daanyeero Xassan Daahir Aweeys, waxeet isku saf u soo galeen yaanan dib loo fiirin qofka.
Qofka hadii uu ogyahay in hadii uu il riddo, po kabacdinna shinta, in walaalkiis, cunugiisa isha laga riddayo, makula tahay in uu si sahlan il qof ugga riddi lahaa? Waa taas mushkiladda Somaliya kasocota oo eey muddo haddeee djaaftayb40 sanno eeybqaadan doonta on eey fahmaan.
Iska dhaafee in wax laga sheego aabaha dhalay qof daanyeer ah, waxaa xaq ah in laga jarro waxa uu geeystay. Meeshaas waaye cilladdanSonaoida heeysato. Hadii uu ogyahay qabqablaha, dillaaga, tuuga, in loo dhacayo, loo dillayo, loon kufsinnayo sidda uu sameeyay ma’idinla tahay dadku in eey wax dhici lahaayeen, kufsan lahaayeen, dilli lahaayeen etc hadii intaba in lagu sameeyaynayo eey ogyahiin?